ဂိုဒေါင်တံခါး China Manufacturers & Suppliers & Factory
ဂိုဒေါင်တံခါး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း ဂိုဒေါင်တံခါး ထုတ်ကုန်များ)
အလိုအလျောက်သတ္တုကဏ္ဍကိုကားဂိုဒေါင်တံခါး တစ်ဦးကပုဒ်မကားဂိုဒေါင်တံခါး panel ကိုအလျားလိုက်အပိုင်းသို့ခွဲထွက်သောကြောင့်, ယနေ့ခေတ်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လက်တွေ့ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ လက်စွဲထိန်းချုပ်မော်ဒယ်သို့ switched - Hongfa ထံမှ Sectioal ကားဂိုဒေါင်တံခါးများအဓိကအားဖြင့်အဝေးမှ operated...
စက်မှုဇုန်လူမီနီယမ်အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး 1. Excellent ကလေတိုက်ခုခံ: ကောင်းသောခွန်အားနှင့်သံမဏိသားညှပ်ပေါင်မုတံခါးကို panel က။ 2. Excellent ကအပူလျှပ်ကာ: တံခါးကို panel ကစုစုပေါင်းအထူ 40 မီလီမီတာရောက်ရှိ 3. High-အကြိမ်ရေစစ်ဆင်ရေး: Torsion နွေဦးချိန်ခွင်လျှာစနစ်ကနေစဉ်အတွင်းအများဆုံးဆွဲအင်အားသုံး counteracts အဖွင့်။ 4....
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိစက်မှုကဏ္ဍကိုအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းကားဂိုဒေါင်တံခါး / အော်တိုကားဂိုဒေါင်တံခါးကို Panel ကို: section pane ထဲကဌ 40 မီလီမီတာ Finger ကာကွယ်မှုပြား 40 မီလီမီတာက Non-လက်ညှိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြား စက်မှုဇုန်အသုံးပြုမှုအတွက် 50mm က Non-လက်ညှိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြား 1) ပစ္စည်း: PU...
ဂိုဒေါင်မှ PU စက်မှုဇုန်ဂိုဒေါင်ပြည်ထဲရေးပုဒ်မတံခါး
ဂိုဒေါင်မှ PU စက်မှုဇုန်ဂိုဒေါင်ပြည်ထဲရေးပုဒ်မတံခါး ကားဂိုဒေါင်တံခါးလှိမ့်လူမီနီယမ်အစဉ်အလာကြိတ်စက်တံခါးများများအတွက်အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ strips တွေအဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကုသမျက်နှာပြင်နှင့်အတူကို double-layer ကိုအလွိုင်းလူမီနီယံနှင့်အထူးသဖြင့်သံမဏိလုပ်နေကြသည်။ 1.CE...
စိတ်ကြိုက်သွပ်ရည်စိမ်အဝေးမှအပိုင်းတံခါးဆွဲယူ Hongfa ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုလျှော high-ခွန်အားကိုအမြန်-စစ်ဆင်ရေး, ကောင်းသော-တံဆိပ်ခတ်ခြင်း, လျော့နည်း headroom occuption နိမ့်သံ, အီးလက်မှတ်နှင့်အတူလွယ်ကူသောအတွက် & ထွက်မူပိုင်ခွင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု device များအတွက် passdoor...
အလိုအလျောက် overhead ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို
အလိုအလျောက် overhead ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို dopt အရည်အသွေးမြင့်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိ, polyester ကုသပုံပန်းသဏ္ဌာန်ခိုင်မာတဲ့ Anti-တိုက်စားစွမ်းရည်ရှိပါတယ်, အမြင့်သိပ်သည်းဆ polyurethane ရေမြှုပ်ဟာ panel ကိုပြင်းထန်မှုနှင့်ပြားချပ်ချပ်ဒီဂရီတိုးပွားစေပါသည်။ တံခါးကို...
ပွင့်လင်းအပိုင်း acrylic ဂိုဒေါင်တံခါး ဒါဟာစိတ်ကြိုက်ကိုလက်မခံ, များစွာသောစတိုင်များ availabe များမှာထိုကဲ့သို့သောစီးပွားဖြစ်ဆိုင်များ, ကွင်းဆက်-စတိုးဆိုင်များစသည်တို့ကိုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောခေတ်မီရိုးရှင်းသောနှင့်ဖက်ရှင်ဗိသုကာစတိုင်များ, သက်ဆိုင်သည်။...
overhead စျေးပေါတဲ့ Glass ကိုကားဂိုဒေါင်တံခါးများ ဖောက်သည်များ '' တောင်းဆိုချက်တွေအရသိရသည်။ ကာကှယျ panel ကိုတင်းကျပ်စွာ panel ကိုလှပသောကြည့်လုံးဝဆန့်ကျင် nipping function ကိုရှိလိမ့်ပါစေ။...
insulator တွင်လည်းပုဒ်မအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းကြွဂိုဒေါင်တံခါး လူနေအိမ်အိမ်များ, ကားဂိုဒေါင်, အလုပ်ရုံ, ဂိုဒေါင်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစျေးဆိုင်များအတွက်သင့်လျော်သော။ ကာကှယျ panel ကိုတင်းကျပ်စွာ panel ကိုလှပသောကြည့်လုံးဝဆန့်ကျင် nipping function...
Polyurethane မြှုပ်ဝင်းဒိုးကိုကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှု တင့်တယ်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ: အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်း လုပ်. ပီပီဖြစ်ယူကြနှင့် safe: လက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကျိုးကာကွယ်ပေးနိုင်၏ဒီဇိုင်းကို; အလိုအလျောက်:...
လူမီနီယမ်အလွိုင်းကြိတ်စက် Shutter တံခါး Hongfa ကြိတ်စက်ရှပ်တာကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုရိုးရာ roller တံခါးများများအတွက်အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ strips တွေအဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကုသမျက်နှာပြင်နှင့်အတူကို double-layer ကိုအလွိုင်းလူမီနီယံနှင့်အထူးသဖြင့်သံမဏိလုပ်နေကြသည်။ ဒါဟာအလှဆင်,...
မူလစာမျက်နှာပုံသွင်းအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက် doble သံမဏိတံခါးကိုမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း polyester မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကုသမှုနှင့်အတူပုဒ်မကားဂိုဒေါင်တံခါး, polyurethane insulator တွင်လည်း, 40-50mm ၏တံခါးကိုအထူ, အစိုင်အခဲ, insulator တွင်လည်း, အပူလျှပ်ကာ, ဖုန်မှုန့်-သက်သေပြ, လေတိုက်ယဉ်,...
ဂိုဒေါင်တံခါး PVC ဂိုဒေါင်တံခါး ဂိုဒေါင် PVC တံခါး Vally ဂိုဒေါင်တံခါး acrylic ဂိုဒေါင်တံခါး ဂိုဒေါင် Chilled တံခါး ဂိုဒေါင်iantရာတံခါး Liftmaster ဂိုဒေါင်တံခါး